Ny kofehy vita amin'ny lotra sy tenona dia voatsindrona indray mandeha indray mandeha, ary ampiana ireo teboka misy ny loko sy ny tenona mba hanovana ny firafitra vita amin'ny lamba ary nantsoina hoe tenona an-joro. Ny firafitry ny lamba dia roa kofehy ambony ary 45 ° haingon-trano diagonal, mazava ny modely amin'ny tsipika eo alohan'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Misy lay 2 amin'ity lamba medaly TPU. Ny voalohany dia lamba fototra. Izy io dia lamba tsy lamba. Ny endrika ambany dia sarimihetsika TPU. Izany dia mahatonga ny lamba ho zotram-pahazavana sy tsy ahodin-drano. Ny sosona TPU malefaka sy malefaka dia mety hampitombo ny tanjaky ny lamba ary manempotra ny lamba. Toetoetra: ...Hamaky bebe kokoa »
Tamin'ny 10 aprily, ny orinasantsika dia nankany Vietnam mba handray anjara amin'ny fampiratiana, mampiseho ireo vokatra lehibe ao amin'ny orinasa: lamba fonosana, lamba rongony, lamba vita amin'ny akanjo, ary nanome ny mpanjifa fampisehoana amin'ny antsipiriany ny vokatra sy ny herin'ny orinasa. Hebei Ruimian Textile Co., Ltd ...Hamaky bebe kokoa »